Faa'iidada iyo faa'iido darrada si ay u doortaan qowladda pachinko heerka isticmaalka yar yahay a
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada si ay u doortaan qowladda pachinko heerka isticmaalka yar yahay a
xilligan aan albaabkii furay qowladda pachinko ah, full of miiska madhan, aad ahaayeen sanqadha ee gobolka, iyo tan sii shop'll stop, waxaan u malaynayaa in ay jiraan dad badan oo aadan dareensaneyn hit ah. Waxa ay u muuqataa wadada, maxaa yeelay, waa tarjumaadda aadan haysan, waxaad ma diidi karaan suurtagalnimada in uu jiro khasaare wax ka mid ah qaybaha sida iibka iyo adeegga macaamiisha iyo adeeg ama xaaladaha goobta ,. Isagoo ka hadlayay of
darrada sida qowladda pachinko ah, sidoo kale waxaa jira miiska lacag la'aan ah, taas oo miiska Waxaan qabaa in ay jiraan waa in xaqiiqada ah in ay adag tahay in ay fahmaan sida wanaagsan madal yahay. Haddii xukunnada waxaa loogu talagalay, dhagar dhici doonaa, waxa uu noqon doonaa adag tahay inuu ku guuleysto. Xitaa haddii ururiyo macluumaad, waayo, Dhaaquut sidoo kale Finensej, macluumaad awood badan sidoo kale waa ay adag tahay in ay yimaadaan.
ku tiirsan POP iyo boodhadh, iwm, xataa haddii Semeyo model ah ayaa ciidanka, waayo taagan jagada bannaanaatay badan, oo aad u tiro badan ku taagan ma aha, ciyaarta ee hit ama daahid, mar dambe ma siiyo qasbay in ay waxa ay noqon doontaa.
halkaas, waxa uu sheegay in khasaaro ugu weyn ee dukaanka wax soo saarka yar yahay.
Si kastaba ha ahaatee, faa'iidooyinka in sida qowladda pachinko a joogo. Qaybta in miiska madhan ka buuxa, aad Maeru in la kordhiyo itimaalka ee ku guuleystay in ay ka faa'iidaystaan ??xaqiiqda ah. In qowladda pachinko ee wax soo saarka yar yahay, sidaa darteed badan orday ma taagnaan waa weyn yahay, waxaa jira waqti dhaq mar mar aan la filayn. Ma waayi dukaanka filanka sare, sidoo kale waxaa jira ama soo saari heshay qarxa.
waa Hodai aad rabto in ay doortaan, sida kaliya ee wax yar play ah, macaamiisha yaqaanaan pachinko badan ayaa, si xoog leh waxaa lagu soo ururin socda isbeddel, haddii eegno wanaagsan ku wareegsan, inta badan sidoo kale macaamiisha joojin lahaa iyagoon aad u badan, aad leedahay. Sidoo kale, haddii aad isku daydo inaad ku guuleysto si ay u hubiyaan in sida dukaan, maalin-ka-maalin xog ururinta si ay dukaan ka badan filanka sare wuxuu noqon doonaa muhiim ah.
xataa Sidaas oo kale, waayo, waxaa qowladda pachinko a ma wanaagsana hawlgalka, maxaa yeelay, way adag tahay in ka akhriyi hirarka xoog dhaqdhaqaaqa per. Sababtoo ah waa turjumaad ah in aan la ordaya, waxaa suuro gal ah in xitaa dhinaca dukaanka aan si buuxda u soo ururiyey by xogta quruxsan.
hawlgalka sare ee dukaanka Pachinko, waxaa jira noocyo kala duwan oo xog wanaagsan dhinaca dukaanka, laakiin kooxda dukaanka doono dabcan faa'iidada badan, in qowladda pachinko hawlgalka hoose, sababtoo ah waa turjumaad ah in aan la ordaya, waxaa suurtagal ah si ay u dukaameystaan ??xog ururinta dheeraad ah Waxa uu noqday xaalad adag.
The shuruud, waa in dukaanka sidoo kale Macaamiisha sidoo kale aan wax badan ka bedesho. Dukaamada, ama kubad waqti kasta, isku day inaad dhawrtaan oo mid ka mid ah caado ka saaray ballamay. Xataa qowladda pachinko hawlgalka yar yahay a, waxaa ka dhigan tahay in ay suurtagal tahay in la kordhiyo jaaniska ah ku guuleystay. Si kastaba ha ahaatee, ciddiyaha giringiriyey adkaynaya, dejinta, maxaa yeelay, waxaa kale oo jira dad badan oo aan leeyahay oo dhan 1, sidoo kale jiri doona baahan yahay in si taxadar leh tallaabo.
iska ilaalin jiray by muuqdaan, dukaanka orodka yar, laakiin, Kaalay in la beddelo jidka fikirka, boqolkiiba guuleystay ilaa sidoo kale ma laga yaabaa in riyo. Kuwa loo yaqaan ma aha oo kaliya qowladda pachinko ee orodka hooseeyo dhow, waxaa laga yaabaa in isku day xataa xiiso leh in la dukaamo Tartamayaashu.
si kastaba ha ahaatee, waxaa asal ahaan nuugaan juice macaan dukaanka of low-socod laga yaabaa in dadka isticmaala sare. Currently, dheelitirka badan oo hoos u dhaca, waxaa lagu talinayaa in ay dib u dhisaan oo ay dheelitirka at dukaanka la howlgal shahaado gaar ah. Waxaa laga yaabaa in SHA. Currently, dheelitirka badan oo hoos u dhaca, waxaa lagu talinayaa in ay dib u dhisaan oo ay dheelitirka at dukaanka la howlgal shahaado gaar ah. Waxaa laga yaabaa in SHA. Currently, dheelitirka badan oo hoos u dhaca, waxaa lagu talinayaa in ay dib u dhisaan oo ay dheelitirka at dukaanka la howlgal shahaado gaar ah.